Kaalinta Turkiga ee Soomaaliya: Gurmad iyo gargaar dhab ah – SAWIRRO – Radio Muqdisho
Kaalinta Turkiga ee Soomaaliya: Gurmad iyo gargaar dhab ah – SAWIRRO
in Maqaallo, Wararka, Xulashada
Waxaa Qoray: Yuusuf Sheikh Ciise
Bishii August 19-keedi sanadkii 2011, waxaa magaalada Muqdisho booqasho ku yimid Ra’iisul-wasarihii Turkiga oo ah madaxweynaha iminka Racep Tayyib Erdogan oo ay la socdaan wafdi ballaaran oo ka tirsanaa xukuumadda iyo ganacsato u dhalatay waddankaasi. Erdogan, wuxuu boqday xeryo ay degganaayeen dad barakacayaal ah oo ku taalla magaalada Muqdisho taas oo caalamka iyo dadka Somaaliyeedba galisay dareen cusub.
Shir jaraa’id oo ay madaxtooyda ku wada qabteen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayuu ku ballan qaaday mashaariic horumarineed in dowladda Turkigu ay ka fulin doonto magaalada Muqdisho, waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa kamid ah in dayactir ay ku sameyn doonaan waddooyinka magaalada qaarkood, ayna dhisi doonaan goobo caafimaad iyo kuwo waxbarasho.
Sidoo kale waxay dowladda Turkigu billowday gargaar bani’aadamnimo oo ay shaqaalaha Turkigu gacantooda ugu qeybinayeen barakacayaashii ay saamysay abaartii dalka ka dhacday 2011-kii. Xerada Barakacayaasha ee Rajo ayay dajiyeen dad badan oo ay wali gacanta ku hayaan.
Haddaba ballan qaadyadii Erdogan maxaa ka fulay?
Dowladda Turkigu waxay dhistay waddooyin badan oo ku yaalla magaalada Muqdisho sida Waddada isku xirta Ex-Kontorool Afgooye ilaa Isbitaalka Laansalooti ee degmada Kaaraan, Waddada isku xirta KM4, Garoonka diyaarada ilaa demada Madiina, waddada 21-ka October ee isku xirta KM4 ilaa Dekadda Muqdisho iyo jid cusub oo u dhaxeeya barakacaaysha Rajo ilaa isgoyska Korontda ee degmada Wadajir kaas oo loogu magac daray ANATOLIA Street.
Sidoo kale waxay dhiseen waddooyin kale oo ay ku jiraan waddada is-raac ee isku xirta Sayirka ilaa Dekada Muqdisho, Waddada u dhaxeysa KM4 ilaa warshadaha ee sii marta Tarabuunka, tan u dhaxeysa isgoyska Banaadir ilaa Tarabuunka ee hor marta isbitaalka Dikfeer iyo waddada isku xirta dekaddii hore ilaa KM0 ama baar FIAT.
Dowoadda Turkigu waxay dhistayIsbitaalkii Dikfeer oo ay ka dhigtay mid ka mid ah kuwo ugu casrisan bariga Afrika, ayadoo la filayo in uu xarigga ka jaro madaxweyne Erdogan marka uu soo gaaro magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, waxay Turkidu magaalada ka hirgaliyeen Isbitaalka DEVA oo ay ka howlgalaan dhaqaatiir Turki iyo Soomaali isugu jira, adeegyo caafimaadna u qabta bulshada Soomaliyeed.
Isbitaallo kale oo uu kujiro SHIFO ayay Turkidu ka hirgaliyeen magaalada Muqdisho.
Dowladda Turkiga ayaa arday Soomaaliyeed siisay waxbarasho lacag la’aan ah oo ay ugu qaadday dalkeeda, waxayna isugu jiraan heerarka kala duwan ee waxbarasha sida dugsi sare iyo heerarka jaamacadeed ee kala ah Degree, Master iyo PHD.
Dugsigii farsamada ee Buulo-Tikniko ayay dayactir ku sameeyeen, waxaana iminka wax lagu baraa dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood dalka dibaddiisa laga keenay.
Sidoo kale jaamacadaha dalka ku yaalla ayuu Turkigu ugu deeqay qalab waxbarasho iyo waliba waxbarasho sare oo loo qaaday macallimiinta wax ka dhigta jaamacadaha dalka qaarkood.
Dowladda Soomaaliya ayaa shirkad Turki ah (Favori) ku wareejisay garoonka diyaaradaha Aaden Cadde, si ay u ballaariso isla markaana u maamusho howlahiisa shaqo. Shirkaddaasi waxay dhistay Terminal cusub oo casri ah, qalabeysan isla markaana dhawaan xarigga laga jari doono.
Sidoo kale Shirkad Turki ah (Al-Beyrakh) ayaa lagu wareejiyay dekadda magaalada Muqdisho, Shirkadaan waxay warbixi ay dhawaan soo saartay ku sheegtay in dhaqaalaha ka soo xarooday dekadda uu sare u kacay muddadii yarayd ee ay maamulayeen.
Heshiiska lala galay shirkaddan waxaa ka mid ah in dekadda Muqdisho ay dhisto oo ay la mid dhigto dekadaha caalamka mustalka dhow.
Imaanshiyihii Erdogan ee Soomaaliya 2011 iyo safaaraddii ay Turkidu ka furateen Muqdisho, waxay horseedday in caalamku Soomaaliya ku eegaan indho ka duwan sidii hore, waxaana dalka booqashooyin ku yimid madax iyo wufuud kala duwan oo heer caalami ah , sida Ban Ki Moon oo ah xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo labo jeer soo booqday Soomaaliya, Wakiillada 15-ka dal ee xubnaha joogtada ka ah Golaha Ammaanka oo shirkoodii ugu horreeyay ku yeeshay Somalia 24 sano ka dib. Waxaa sidoo kale dalku marti geliyay shirar heer goboleed ah oo uu ugu dambeeyay shirkii wasiirrada arrimaha dibadda dalalka IGAD ee bilowgii sanadkan ka dhacay Muqdisho.
Sidoo kale dowlado badan ayaa safaarad ka furtay Muqdisho.
Dowladda Turiga ayaa qabatay shir caalami ah oo lagu taagerayo Soomailya oo ay ka qeyb galeen in ka badan 50 waddan oo caalamka ah.
Sidoo kale Tukigu wuxuu fidiyay gogol ay ku wada hadlaan Dowladda Soomaliya iyo maamulka Soomaaliland , wadahadalladaas oo ay garwadeen wali ka tahay Turkey.
Dowlada Turkigu waxay Soomaaliya ka taageertaa miisaaniyad sanadeedkeeda, ayadoo siisa lacago ay u kaashato socodsiinta howlaa dowladda.
Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan ayaa mar labaad booqasho ku imaan doona magaalada Muqdisho 4 sano kaddib, dowladda Soomaaliya ayaa u diyaar garowday soo dhaweynta Erdogan iyo wafdigiisa. Socdaalkiisan ayaa ku soo aadaya ayadoo magaalada Muqdisho ay ka muuqdaan calamada Turkiga iyo taageeradii uu siiyay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana dadka Soomaaliyeed ay u hayaan walaalaha Turkiga abaal aan la illaabi Karin.
Soo Dhowoow mudane Erdogan.
IGAD “Al-Shabaab ma awoodaan inay carqaladeeyaan soo dhaweynta Ordogan”